भ्रष्ट राज्यसत्ताको अन्त्य कहिले हुन्छ ? - Khabar Nepali
होमपेज / Uncategorized / भ्रष्ट राज्यसत्ताको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
दिनदिनैको जुलुस र शक्ति प्रदर्शन । आम नागरिकलाई दुःख । ‘कोभन्दा को कम’को माहोलले सडक अवरुद्ध । अस्पताल नपुग्दै छटपटिँदै मर्नुपर्ने अवस्था । कम्युनिस्टका लाल गद्दारहरू । कुर्सीको पछाडि ‘स्वाँ स्वाँ’ गर्दै शक्ति प्रदर्शनमा लाखौँ जनतालाई उल्लु बनाए । कुदाइरहेका छन् । के कम्युनिस्ट आन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धमा जनताको रगतले खेलेको होली आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नलाई मात्र थियो ?
उखु किसान लगायत अन्य मजदुरलाई उनको परिश्रमअनुसारको कमाइ दिएको खोइ ? धनी, गरिब र कामदारको रगत चुस्ने साहुहरूले उनीहरूमाथि गरिरहेको शोषणको अन्त्य भाको खोइ ? युद्ध लड्दा घाइते भएका जनमुक्ति सेनाको उपचार कहिले हुन्छ कमरेड ?
के कम्युनिस्ट अब ‘कमाउनिस्ट’ भएकै हो त ? जनताले विश्वास गरेर दिएको मत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’जस्ता खोक्रा नारा सुनाउँदै के अर्को चुनाव जितिएला त कमरेड ? चेलीहरू अब घरबाट बाहिर निस्किँदा दबिएर, आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आखिर कति दिनसम्म कायर बनेर हिँड्ने हो ? कति दिनसम्म ती नरपिचासहरूको शिकार भई बलात्कृत हुने हो ?
कति दिनसम्म चेलीको भोटो फाटिँदै, तेजाब आक्रमण हुने हो ? कति दिनसम्म छाउपडी गोठमा बसी अकालमै ज्यान गुमाउने हो ? माइतीघरको आन्दोलनमा गुन्जिएका नाराहरूले कहिले तिम्रा ती कठोर मन पगालिदिन्छ ?
राजनीतिक संगठनलाई आपराधिक ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएर के पायौ ? भ्रष्टाचार, आफ्नो भूमि मिचिँदा मौन रहने ? टनकपुर बेच्ने दलाल राष्ट्रघातीहरूलाई खोइ कारबाही ? लिपुलेक-कालापानीलाई नक्सामा कोर्दैमा हाम्रो भूमि फिर्ता आउँदैन । चुट्किला-उखानहरू भन्दै हँसाउने र कुराअनुसार विकास नगर्ने के काम ?
पानी जहाज, रेल, घर-घरमा ग्यास पाइप । यस्ता सपना देखाइयो । रोजगारीको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता । दलाल तथा भ्रष्ट राज्यसत्ताको अन्त्य कहिले हुन्छ ? मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र मध्यम वर्गको अधिकार दिन वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नैपर्छ ।